“ချစ်စရာ့အရွယ်” (ဓာတ်ပုံပြပွဲ -၂) 2012 June | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Photography » “ချစ်စရာ့အရွယ်” (ဓာတ်ပုံပြပွဲ -၂) 2012 June	148
Posted by Munetez on Jun 27, 2012 in Photography | 148 comments
7). -, -, -
11). -, -, -
မောင်ပေ says: no5ကို ကြိုက်တယ် ဗျို့
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7065
etone says: နံပါတ် ၂၄ ကိုကြိုက်တယ် … ။ ဘယ်သူရိုက်တာလဲတော့မသိဘူး … ။
ko htet says: ကောင်းပါတယ် အားလုံး ကလေးတွေကနောင်လာမယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်လေး
htoosan says: ဝေး … ဒီတခါဗုဒ် ထားတဲ့ ပုံ ထိပ်ဆုံး အပြတ်ရောက်နေပါသည်… :grin:
metallic says: ၆
Mr.Know-All says: ဟား ဒီတစ်ခါ ပုံတွေက မနည်းဘူးဗျို့ သေချာစဉ်းစားပြီးမှ ဗုတ်တော့မယ်
padonmar says: ခုတလော မောင်ဂီပျောက်နေတယ်။နေမှကောင်းရဲ့လား။
အရီးခင်လတ် says: နေတော့ကောင်းမယ်ထင်ပါရဲ့ အစ်မ ရယ်။
တဗြဲဗြဲ နဲ့ ရင်ဘတ်ထုထုပြီး ငို ရလွန်းလို့ မော သွားတာနေမှာ။ အဟတ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 188
မဂွတ် ထော် says: သဘောကျတယ်ဗျာပုံလေးတွေက ချစ်စရာကောင်းတော့
Inz@ghi says: ၁) DoF ပိုမို shallow ဖြစ်လျင် ပိုကြွမည်ထင်ပါသည် f/2.8 ကိုပဲ ကျနော် မျက်စိစွဲနေလို့လား မသိပါ
ဖလစ်ပ်အောက် လုပ်လို့ရတဲ့ မော်နီတာပါတဲ့ ဒီ- ကိုင်ထားပြီး သည်လောက်ပဲ ရခဲ့တာ … ရင်ထဲမကောင်းလှပါ…။ ၁၁) နောက်ထပ် ပုံဟောင်း ၁ပုံပါ … သာမန် မှတ်တမ်းပုံ ၁ပုံဆိုတာထက် ဘာမှမပိုပါ
ပြောစရာ မလိုတဲ့ ပုံပါ…။ တခုလေး ဝေဖန်ချင်တာတော့ cropping ပါပဲ .. ။ ၁၉) ဒီပုံရဲ့ ဖွဲ့စည်းမှု ကို သဘောကျပါတယ်..။ဘယ်ဘက် အပေါ်ထောင့်ကနေ ညီမ(အထင်) ကို ငုံ့ကြည့်နေပုံ ..က
ဖောက်ရင်း အဲ့သည့်ကြား ၀င်ရိုက်တယ် ထင်ပါတယ်…။ ပြေပြစ်တဲ့ ပုံ မပေါက်ဘဲ အမှိုက်ပွနေတယ် ခံစားမိပါတယ်။ ၃၀) ထီးတစောင်းလေးမို့ … ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ပုံပါ …. နှစ်သက်စရာ ကောင်းပါတယ်… ။ crop လည်းကောင်းမွန်ပါတယ်။
MaMa says: ဆရာတော်ဘုရား-
အာဂန္တုကြွမယ်ဆိုရင် နှလုံးသား မရှိတဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် အရပ်ကို ကြွရမှာ မှားနေမှာစိုးလို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 728
Mon Kit says: မွန်ကစ် ပုံလေးကို ဗုတ်ပေးထားသူ လေးဦးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်..
metallic says: ပုံကြည့်လိုက်ရ စာဖတ်လိုက်ရနဲ့
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1265
Shwe Ei says: သဘောကျတာတွေများနေတယ်။ ဆြာဂီလိုတော့ တက်ကနစ်တွေ မသိဝူး။ အမြင်အရကြိုက်တာက
ဒါ့ပုံတင်သူများအားလုံးကိုတော့ ဘရာကြော်ပါခင်ဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 24
တောသားလေး says: ပုံလေးတွေအကုန်လုံးက ချစ်စရာလေးတွေကြီးပဲ ချစဖို့ကောင်းတယ်နော်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1531
ကိုရင်စည်သူ says: Hi, Guys.. I like No.17 photo. Everything OK my lovely villagers?
သကြားလုံးကြော် says: ဒီပြပွဲက မပိတ်သေးဘူးလားဟင်။ July လ၀က်တောင်ကျိုးတော့မယ်။ နောက်လအတွက် ခေါင်းစဉ်ပေးပြီးသွားပြီလား။
အရီးခင်လတ် says: ခေါင်းစဉ်က “ဘဝ” တဲ့။ :-)
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 416
ဂန္ဒာရီဆြာအုပ် says: “ဘဝ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစီး က အရမ်းကျယ်ပြန့်နေတယ်ေ်နာ် .. ဘာဘ၀ကိုရိုက်ရမှာ.. ကလေးဘ၀လား.. ဆိုက်ကားဆ၇ာဘ၀လား.. မြင်းလှည်းဆရာဘ၀လား.. သုဌေးဘ၀လား.. ဆင်းရဲသား လက်လုပ်လက်စားဘ၀လား.. ကြွက်ဘ၀လား.. နွားဘ၀လား.. အရမ်းကျယ်နေတယ်နော်..နဲနဲ ချုံ့လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်..
Mလုလင် says: ကဲကဲ .. ကြေညာ ပါဗျို့  .. လက်ဆောင် ပေးဖို့ .. အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီ ဆိုတာလေး …….. ….. ဒီလ အတွက် လူကြိုက်အများဆုံး ပုံ ၃ ပုံအတွက် memory stick ၃ ချောင်းပါ။ price များများ မပေးနိုင်ပေမယ့် …. value ကောင်းကောင်း နဲ့ အမှတ်တရ ဖြစ်နေစေဖို့ ….. ပါ။
ဂန္ဒာရီဆြာအုပ် says: ၀ုတ်ပါဒယ်..၀ုတ်ပါဒယ်
Khaing Khaing says: ဟုတ်ပါတယ်ဗျို့ …… ဘယ်နေ့နောက်ဆုံးဗုတ်ပိတ်တယ်ဆိုတာလည်းမပြောမကြေငြာပါလားဗျို့ .. ဦးသွားချီးလည်း ဘယ်ပျောက်နေလဲဗျို့ ……. ကလေးပုံလေးတွေတင်ထားတာတော့ ကောင်း ပါတယ် …. ဒါပေမယ့် ပြပွဲအဆုံးအဖြတ်လေးတော့ လူတွေကသိချင်နေမှာပေ့ါနော် ……
ဂန္ဒာရီဆြာအုပ် says: တစ်ခုအကျန်ပေးဘာရဇေဂျို့
Mလုလင် says: ဟေ့လူ ၀ယ် ပြီး နေပြီ ….. ခုမှ လာပြီး …. နေ ကို သူ့ ဘာသာ သူမနေ ခိုင်း ဘဲ လိုက် အုပ် နေ .. လိုက် ကာ မနေ နဲ့ တော့ ….
ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် says: လုပ်လိုက်ဟ.. တော်ပါပေ့ အရေးအသား
Was this answer helpful?LikeDislike 481
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: အားလုံးတစ်မျိုးစီပါပဲ…
padonmar says: ကလေးတွေကတော့ ချစ်စရာလေးတွေချည်းပါဘဲ။အဖြေကမှန်းလို့ရနေပြီ။
amatmin says: ပထမဆုရသူကို ဘီယာတိုက်ဖို့စည်းရုံးပီးဖြစ်ပါသောကြောင့်..
ပူးလ်မြန်မြန်ပိတ်ဖို့ မျှော်လင့်နေပါကြောင်း :P
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 184
၀င့်ပြုံးမြင့် says: မမဂီရေ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8432
kai says: poll ပိတ်ရက်ကြေငြာပါဗျို့…
ဆရာတွေဘယ်ရောက်ကုန်ကြပါလိမ့်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1461
Mလုလင် says: ပိတ်မယ့် ပိတ်တော့ … အမြန်ဆုံး ပိတ်ချင်တယ်ဗျို့  ….လက်ဆောင် က လဲ အဆင်သင့် … ဖြစ်နေပြီ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8228
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အော် ကျနော်က သူကြီးမပိတ်သေးတာမှတ်တာ.
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 83
Shar Thet Man says: ဘယ်နံပါတ်မှရယ်လို့တော့မရွေးချင်ပါဘူး။ကလေးဆိုတာကတော့ကလေးအရွယ်မှာအကုန်လုံးကအပြစ်ကင်းစင်တဲ့သူတွေပါပဲ…အကုန်လုံးကိုချစ်ပါတယ်….သူတို့ကိုကလေးအတိုင်းပဲရှိစေချင်တယ်…..
kai says: pollပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း..
တာဝန်ရှိသူများ.. ကြေငြာစေလိုကြောင်း… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 26
CASPER says: ပုံလေးတွေ အရမ်းလှလို့ နောက်ပြိုင်ပွဲတွေ ရှိရင် တစ္ဆေလေးကို ပါဝင်ခွင့်ပြုကြပါနော်
Mလုလင် says: လူကြိုက်အများဆုံး ပုံတွေ အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ။ ဒီလ မှာ တတိယ က နှစ်ခု ဖြစ်နေလေတော့ … တစ်ပုံ ရွေးလိုက်ရတယ်ဗျာ .. အဲဒါလေး နားလည် ပေးပါနော်။
အဲဒါ .. ကျေးဇူးပြုပြီး အဆက်အသွယ် လုပ်ကြပါဦးလို့ .. ဒုတိယ အကြိမ် တော့ ပြီးဆုံး သွားပါပြီ …။
ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် says: အဆက်အသွယ် လုပ်ကြပါဦးချိုတော့ ဘယ်ရို အဆက်အသွယ် လုပ်ရမှာရဲ..
Solid_Sn@ke says: တပါတ်ပြည့်ကတည်းက ဖြုတ်ပါ ဖြုတ်ပါဆို..မဖြုတ်ဝူး ….
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1130
မှော်ဆရာ says: နောက်ခေါင်းစဉ်ကို အားမာန် လို့ ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ
Comments By Postကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ -etone - kyeemiteရွာသူ/သားများ အတွက် - ရဲစည် - KZ၄ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - မင်းမင်း - kyeemite``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - ခင် ခ - ခင် ခရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း - kyeemite - အရီးခင်လတ်အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - kai - ဦးဦးပါလေရာသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - kai - အလင်း ဆက်Comment မှာ လူစည်ချင်ရင် (ယတြာ) - TNA - အရီးခင်လတ်လူစွန့်စားမြင့်ကျော်နှင့် ခေါင်းပြတ်နတ်ရုပ်တု (စ/ဆုံး) - ဦးဦးပါလေရာ - ရာမညသဂျီးနောက်ကနေ ဘယ်သူထိုး who? - Wow - ဆူးနားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - အရီးခင်လတ် - Ei Kyipyarမန္တလေးမြို့ကအစားအသောက်တွေ - KZ - kaiအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - အရီးခင်လတ် - Foreign Residentအတိတ်က ခြေရာတွေပြန်ကြည့်ရအောင် - အရီးခင်လတ် - ဦးကြောင်ကြီးသို့ ချစ်သောဖေဖေ - အရီးခင်လတ် - Myo Thantမောင်ပေ ရဲ့ ပုံတိုပတ်စများ - ရဲစည် - မောင် ပေ``ဒေဝေါကြီး လာမှာစိုးတယ်´´ - ခင် ခ - Munetezအိပ်မက်မင်းသမီး - Myo Thant - သူကလေးနံရိုးကြံမဆိုင် မြီးရှေ easy cook - weiwei - Miss Crystallineသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - kyeemite - ဦးကြောင်ကြီးငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - သူကလေး - Mobile13တောင်းပန်အပ်ပါသည်။ -etone - သူကလေးကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - သူကလေး - Mr. MarGaEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities